သမ္မတထရန့်၏ တံတိုင်းကာရံရေးအတွက် ငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှု ခွင့်မပြုနိုင်ဟု ရီပတ်ဘလီကန် အမတ်? - Yangon Media Group
သမ္မတထရန့်၏ တံတိုင်းကာရံရေးအတွက် ငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှု ခွင့်မပြုနိုင်ဟု ရီပတ်ဘလီကန် အမတ်?
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် မြူတိုစီကို လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး အတွက် လျာထားသောအသုံးမပြု ရသေးသည့် သဘာဝဘေးအန္တ ရာယ်ကာကွယ်ရေး ရန်ပုံငွေများ အား မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တံတိုင်း ကာရံရေးတွင် ပြောင်းလဲအသုံးပြု မည်ဟူသည်ကို မိမိတို့သဘောတူ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း လွှတ် တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းမှ ရီဘတ်လီကန် အမတ်များက ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည် ဟု ဇန်နဝါရီ ၁၂ရက်သတင်းများ အရသိရှိရသည်။
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘက် လက်(ရှ်)က အိမ်ဖြူတော်သည် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ကို ယမန်နှစ် ကချထားပေးသော ဘတ်ဂျက်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးစေကာ ပိုလျှံ ငွေများထွက်လာပါက အကြောင်း ကြားရန်ညွှန်ကြားထားပြီး ယင်းကို နိုင်ငံအရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေ ညာကာ ပြောင်းလဲရယူမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းငွေဖြင့် ကွန်ဂရက်ကို အသိမပေးဘဲ နယ် စပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုမည်ကို သိရှိရသည်ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဖလော်ရီဒါ အောက်လွှတ် တော်အမတ် ဒန်ခရင်ရှောအာ ကလည်းအိမ်ဖြူတော် ခေတ္တအရာ ရှိချုပ် မစ်မူလ်ဗန်နီသည် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အရေးပေါ်ရန်ပုံ ငွေများကို သမ္မတကယူသုံးသည် မှာသေချာသည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း တွစ်တာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ရီပတ်ဘလီကန် အမတ် ကီဗင်တ်ဘရန်ဒီက ”ဘေး အန္တရာယ် ရန်ပုံငွေများကို အိမ်ဖြူ တော်ကယူမသုံးသင့်”ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။ ”အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာဖို့ဆိုတာက ကျုပ်အဖို့အ လွယ်လေးပါဗျာ။ အခုကြေညာအ ခုရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါလီမန်နဲ့ဒီကိစ္စ အရင်ညှိချင်သေးတယ်”ဟု သမ္မတ ထရန့်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
မသုံးရသေးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးရန် ပုံငွေများမှာ ဒေါ်လာ ၁၄ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။ စစ်ဘက်အင်ဂျင်နီ ယာတပ်ဖွဲ့များ၏ ဘတ်ဂျက်၌ပို လျှံငွေများမှာ ၁ဝ ဘီလီယံခန့်ရ နိုင်သည်ဖြစ်သည်။ ပွာတိုရီကို အရာရှိများကလည်း သမ္မတထရန့်၏ ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲရေးသည် လက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာမဟုတ်ဟု ပြောဆိုကာ ပွာတိုရီကို နိုင်ငံတွင်မုန်တိုင်းအ ဆင့်-၄ မာရီယာမုန်တိုင်းကြောင့် နိုင်ငံတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည်မှာ ဒေါ်လာ ၁ဝဝ ဘီလီယံရှိနိုင်ကြောင်း ပြော ဆိုလိုက်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရီကာခိုရီကန် ဒိုရိုဆယ်လ်လိုက ”တံတိုင်းမတည် ဆောက်ရလို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ သဘာ ဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ရပ်ရပ် ကျလာ ရင်တော့ လူအမြောက်အမြားသေ ဆုံးရမယ့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်” ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယား နိုင်ငံကို North Macedonia ဟု အမည်သစ်ပြောင်းလဲ
အငြိမ်းစားများ နာရေးကူညီမှုအသင်း (လှည်းကူးမြို့နယ်)၏ ခုနစ်နှစ်တာသက်တမ်းတွင် နာရေးနှင့် ဆေး?
ခြောက်နှစ်အတွင်း စပိန်ဘာသာဖြင့် ဘေးလ် မပြောခဲ့ဟု မာဆယ်လို ဖွင့်ဟ
ဇာတ်ပွဲများတွင် ပြုလုပ်သည့်လောင်းကစားဝိုင်းများကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ ပူးပေါင်းအဖွ?